I-Shenzhen Fangcheng Teaching Equipment Co., Ltd. yasekwa ngo-2009, ikomkhulu elise-Shenzhen lishishini lobugcisa obuphezulu obukhethekileyo kwi-R & D, imveliso kunye nokuthengiswa kwezixhobo zemfundo yemultimedia.
Nge-brand EIBOARD kunye ne-FCJYBOARD, iimveliso eziphambili ziyi-LED Recordable Smart Blackboard, i-LED Interactive Touch Screen.
I-Multimedia yonke-in-enye Whiteboard, Interactive Whiteboard,Multimedia All-in-one PC, Interactive Terminal,Ultra short juju projektha kunye nezinye izisombululo smart ezilungiselelwe iimfuno ezahlukeneyo zabathengi bayo, ezisetyenziswa ngokubanzi ezikolweni, iiyunivesithi, iinkulisa, amaziko oqeqesho, corporations kunye namaziko karhulumente.
Ukususela ekusekweni kwayo, FangCheng iphumelele kushishino lwemfundo "Brand Chinese" ibhaso, "China top 10 Impembelelo Teaching Industry ibhaso" ibhaso, ifumene CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 izatifikethi.
Ngeqela eliqinileyo le-R&D kunye nemigca yemveliso emininzi, iFangCheng inamalungelo awodwa abenzi behardware kunye namalungelo ekopi yesoftware. Iimveliso zithunyelwe kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla ngokusebenzisa abasasazi bayo, ii-arhente kunye namaqabane e-OEM & ODM kwihlabathi jikelele, kwaye zamkelwe ngamxhelo mnye ngabasebenzisi.
I-FangCheng ibambelela kumgangatho we-"Educational Informatization 2.0", kwaye ivelisa izinto ezintsha kwimfundo yenkonzo.
Ngombono "wokuba luphawu olukhokelayo lwehlabathi lolwazi lwezeMfundo" kunye noMthunywa "wokuNcedisa ukufundisa ngobuchule"
asisoze siyeke ukuphuhlisa iimveliso ezintsha kunye nezisombululo ezidibeneyo zokuzalisekisa iimfuno ezivelayo zabathengi bethu.